kunconywa olokufundisa u-matric emsakazweni - Ilanga News
Home Izindaba kunconywa olokufundisa u-matric emsakazweni
kunconywa olokufundisa u-matric emsakazweni
KWELULWA amakilasi asemsakazweni okuhloswe ngawo ukulekelela abafundi baKwaZulu-Natal, njengoba uMengameli Cyril Ramaphosa ememezele ukuvalwa kwezwe kwaphazamiseka nemfundo.
Okhulumela uMnyango weze-Mfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe njengoba bekulindeleke ukuba aphothulwe ngeledlule amakilasi, azoqhubeka ukuze abafundi bezohlala benemi-qondo elungele umsebenzi wesikole njengoba besazohlala emakhaya isikhathi eside.
Uthi nakuba amakilasi esiza kakhulu umatikuletsheni, kodwa namanye amabanga anezikhathi ahlelelwe zona emsakazweni. Uveze ukuthi lo msebenzi wenziwa ngothisha abathile ababukhali, abafundisa emsakazweni.
“Sizoqhubeka nokusiza abantwana, okwabo nje kumele balalele imisakazo yomphakathi nemikhulu, bakhona othisha bayafundisa ngezikhathi ezithile ezihleliwe,” kusho uMnu Mthethwa. Uthi izifundo eziyingxenye yokuba zifundwe emsakazweni, yiMathematics, iHistory, iLife Sciences, iBusiness Studies nezinye.
UNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga, useluncomile lolu hlelo lwesifundazwe. Uthi nezinye izifundazwe kungaba kuhle ukuba zisike iphethini ukuze abafundi bengeke basalele emuva kakhulu njengoba izwe libhekene nenkinga ye-coronavirus. Ungqongqoshe ubuye wachitha namahlebezi athi izikole zizovulwa emuva kuka-Nhlangulana (June).
“Okwamanje sonke silindele ukubona isimo sezwe ukuthi sihamba kanjani, kodwa konke kulele kuNgqongqoshe wezeMpilo, uDkt Zweli Mkhize ngemibiko ezositshela ukuthi sibhekephi kusuka manje kuya phambili, kanti umlomo wokugcina nguMengameli Ramaphosa,” kusho uNkk Motshekga.
Izikole bekulindeleke ukuba zivulwe mhla ka-14 kuMbasa (April), okungenzeka zivulwe ezinsukwini ezimbalwa kusukela kolubekwe ngumengameli wezwe lokuvulwa kweNingizimu Afrika.
UMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, sewunxuse abafundi ukuba balalele uKhozi FM phakathi nezinsuku ngehora lesi-21h00 ebusuku, iVuma FM phakathi nezinsuku emini ngehora lesi-9 ekuseni kuya ku-15h00 kanti iGagasi FM ne-East Coast Radio bazozihlelela izinhlelo nezikhathi.
Previous articlebafuna uhulumeni angakhethi iphela emasini kwezobuciko
Next articleOkumele kwenziwe wumndeni ngokuhlehla komsebenzi wamadlozi